Fanitsiana Ball Bearing
Torolalana Bearings Ball
Bantal Block Ball mitondra ondana
Bearing amin'ny kodiarana
Miniature Deep Groove Ball mitondra
LINQING XINRI PRECISION BEARING CO., LTD. dia famokarana mitondra fianakaviana manokana hatramin'ny taona 2006, ny filozofianay: mahazoa fahatokisana amin'ny fahamarinana, mandresy amin'ny kalitao, mivoatra amin'ny fanavaozana, ary manararaotra ny fahafahantsika manokana amin'ny alàlan'ny fanahy miketrona.
Amin'ny varotra isan-taona manerantany mihoatra ny 150 tapitrisa dolara amerikana sy trano an-trano isan-taona mihoatra ny 7000 tapitrisa set, amin'ny fotodrafitrasa mihoatra ny 2 tapitrisa metatra toradroa, XRL dia iray amin'ireo mpamokatra lehibe mitondra izao tontolo izao. Raha ny marina, XRL dia efa amidy amin'ny firenena maherin'ny 120 manerantany.
Amin'ny alàlan'ny ezaky ny mpiasan'ny varotra rehetra mitondra ny XRL, dia efa nanondrana firenena 120 manerana an'izao tontolo izao izahay.
XRL dia manamarika ihany koa ho an'ny serivisy manara-penitra, mamaly, 24/7/365 - ny mailaka sy ny mailaka rehetra dia voavaly ao anatin'ny adiny enina, azo antoka!
XRL Co., manana ekipa teknolojia matanjaka miaraka amin'i injeniera japoney hamaha olana isan-karazany amin'ny fampiharana sy ny fampiasana ny fitaratry antsika.
Manana mpiasa matihanina hiasa izahay. Ary azonay atao arakaraka ny sary na ny fitakiana famokarana vita vita.
Afa-tsy ny varotra ao an-trano dia efa nanondrana any amin'ny firenena maherin'ny 120 ny fiakarana XRL.
K dia manantena ny hiara-miasa amin'ireo mpanamboatra izay namokatra miaraka amina bearings avo lenta ihany. Mila mampiasa XRL bear izy hanolo ny bearings SKF amin'ny tsena farany
Ankasitrahana tokoa izahay noho ny fahatokisany, tsy dia be resaka izy ary nametraka didim-pitsarana avy aminay. Maka ny kalitao amin'ny toerana manan-danja izy ary mitovy ny lanjanay amin'izany.
Rehefa vita ny didim-pitsarana dia nametraka baiko marobe avy aminay indray izy, ary miresaka izahay fa ho avy tsy ho ela izao ny kaomandy vaovao.
Izahay dia mikasa ny hampivelatra azy ho mpandraharaha marika XRL any Pakistan.
Russia dia tsenan'ny fanjifana entana lehibe. Saingy noho ny politikany manohitra ny fanariana, dia olana lehibe ho an'ny mpanjifa manafatra avy any Shina. Nandritra ny taona maro dia niainana ny fiaraha-miasa amin'ireo namana sy mpiara-miasa Rosiana, manana mpampita entana matotra afaka mitondra fitaterana avy any Malezia na Thailand, afaka mitahiry be ho an'ny mpanjifa. Azontsika atao ny manao Thailand sy Malaysia CO ho an'ny mpanjifa manao fahazoan-dàlana.
Ny fifandraisan'i Afrika amintsika dia tsara toy ny an'ny havana akaiky sy ny mpifanila vodirindrina amintsika. Tany am-piandohana dia nanomboka tamin'ny santionany vitsivitsy i J mba hitsapana ny kalitao sy ny valin'ny tsena. Taty aoriana dia nampitomboiny ny isan'ny filaharana isaky ny mandeha, na dia tamin'ny fotoana sarotra indrindra tamin'ny coronavirus tamin'ny aprily 2020 aza dia nametraka baiko iray ho anay koa izy, tena ankasitrahana izahay noho ny fanohanan'izy ireo. Amin'ny maha-kalitao avo lenta sy tsara tarehy fonosana an'ny XRL bearings azy, dia namidy haingana tao anatin'ny andro vitsivitsy taorian'ny nahatongavany tao amin'ny seranan-tsambo.
N no masoivohonay any Peroa, ary izy no solontenanay voalohany tany amin'ny firenena amerika atsimo. Nanomboka tamin'ny kaomandy kely voalohany ary nanatitra LCL, Fa ankehitriny dia afaka manafatra kaontenera 1 * 40FT isam-bolana izy. Ankehitriny, tsy vitan'ny mpiara-miasa ihany isika fa namana tsara amin'ny fiainana.
Amin'ny maha agents anay miaraka amina marika XRL dia omenay fanomezana maimaim-poana izy, toy ny penina sy T-shirt miaraka amin'ny XRL LOGO, ary manome ny fiarovana ny tsena sy ny serivisy matihanina tsara indrindra koa izahay, mampivelatra ny tsena. Ary matoky izahay fa izy no ho mpandraharaha lehibe indrindra any amin'ny firenena amerikana atsimo ato ho ato.
Mihaona amin'ny fampiratiana Shanghai 2016. Izahay dia manao OEM miaraka amin'ny marika ho an'ny T, nanana baiko be dia be isan-taona izy ary amidy tsara any amin'ny tsenan'i Ukraine ny bearings.
Y koa avy any Ukraine, nitantana ny orinasan-tsolika fiara teo an-toerana izy, nandeha imbetsaka tany Chine isan-taona izy ary nanao ny fividianana, nandidy anay indrindra ny marika mitondra ny marika LADA, VPZ, VBF, SPZ Etc ..
Nahita anay tamin'ny alàlan'ny tranokalan'ny orinasa izahay, ary efa nametraka baiko 5 izao. Na dia tsy betsaka aza ny habetsahan'ny kaomandy, dia mety hanana fivoarana lehibe izany. Ankoatr'izay, ho an'nyvietnamiana tsena, nanana traikefa betsaka tamin'ity tsena ity izahay, manantena ondana avo lenta afaka manome azy ireo ny COPE voamarina ihany koa izahay hanampy azy ireo hanao fahazoan-dàlana amina hetra ambany.
Mey 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL mitondra
Septambra 2016 Shanghai World Expo XRL miteraka
2016 Autumn Canton Fair XRL miteraka
Septambra 2017 Shanghai World Expo XRL miteraka
Shanghai World Expo XRL fiterahana
Ny fiorenan'ny Shanghai World Expo XRL 2018
Linqing Xinri Precision Bearing Co., Ltd. dia mpanamboatra famokarana manan-janaka hatramin'ny taona 2006, ny filozofianay: mahazoa fahatokisana amin'ny alàlan'ny fahitsiana, mandresy amin'ny kalitao, mivoatra amin'ny fanavaozana, ary manararaotra ny fahafahantsika manokana amin'ny alàlan'ny fanahy miketrona. [..]
Adiresy: Zaridaina indostrialy Yan Dian Town, Tanànan'i Linqing, Faritanin'i Shandong, Sina
Telefaona: + 86-635-2857766